अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – Sandesh Press
Apr302022 by Usha Lama AdminNo Comments
ब्राजिलमा एक अनौठो घटना घटेको छ । एक २६ वर्षिया पुरूसँग कारभित्र शारिरिक सम्पर्क राख्दा १५ वर्षिया युवतीको निधन भएको छ । बेलायतबाट प्रकाशित हुने द् सनमा छापिएको रिपोर्टका अनुसार १५ वर्षिया युवती ग्याब्रिएली डिक्सन एल्भेस नासिमेन्टोको कारभित्र यौनसम्पर्क गर्दा अगस्ट १ मा हृदयघातबाट मृत्यु भएको हो । प्रहरीले उनको रहस्यमय मृत्यु भएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।शारीरिकसम्पर्क गर्दै थिए । यही क्रममा अचानक ग्याब्रिएल्लीको ओठ र छाला पहेंलो भयो र उनका हात लुला प्रहरीका अनुसार ब्राजिलको क्युबाताओ सहरबाट उनलाई अचेत र गुप्तांगबाट रगत बगिरहेको अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो । क्लिनरको काम गर्ने २६ वर्षका पुरुषले उनलाई अस्पताल लगेका थिए । ती पुरुषले पुलिसलाई बताएअनुसार उनीहरु उनको कारमा शारीरिक सम्पर्क गर्दै थिए । यही क्रममा अचानक ग्याब्रिएल्लीको ओठ र छाला पहेंलो भयो र उनका हात लुला भए ।
Apr282022 by Usha Lama AdminNo Comments
काठमाडौँ – चिनमा पुरुषहरुले शु’क्रकिट दान गरेबापत झण्डै १ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम पाउने भएका छन् । चीनको एक शु,क्र किट बैंकले आम पुरुषहरुलाई शु,क्र किट दान गरेबापत झण्डै १ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम दिने घो’षणा गरेको छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**** चीनको झेजियांग ह्यूमन स्पर्म बैंकले सोसल मिडियाबाटै शु, क्र कीट दान गर्नका लागि अपिल गरेको हो । त्यति मात्र नभई शु, क्र किट बैंकले पछिल्ला केही महिना यता लगातार मानिसहरुलाई शु,क्र कीट दान गर्नका लागि अपिल गरिरहेको छ । स्पर्म बैंकका अनुसार शु,क्र कीट दान गर्ने व्यक्ति २० देखि ४० वर्षसम्मको हुनु पर्नेछ । साथै व्यक्तिको पढाई कम्तिमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण तथा उचाई कम्तिमा ५ फिट ४ इन्च र हुनपर्ने जनाएको छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
काठमाडौं : युक्रेनमाथि कारवाहीपछि रुस “कमजोर देश” बनेको यूकेका रक्षामन्त्री बेन वालेसले बताए। रुसी सेना थाकेको र उनीहरूको देशले ठूलो नोक्सान बेहोरेको उनको भनाइ छ। उनले स्काई न्यूजसँग भने: “राष्ट्रपति पुटिन पहिले जस्तो शक्तिशाली छैनन् र उनी अब आफैले बनाएको पिँजडामा थु’नि’एका मानिस भएका छन्। रुसी सेनाको भव्य प्रतिष्ठा खेर गएको छ।” युक्रेनमाथि कारवाहीको नतिजा मात्र नभई आफ्नै सेनालाई गरेको व्यवहारको नतिजा समेत भोग्न पुटिन बा ध्य भएको वालेसले बताए। कारवाहीसुरु भएको दुई महिना पुगिसकेको छ । यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह शहर मारियुपोलमाथि क ब्जा गरेको छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिरि पुटिनले मारियुपोलमाथि जीतको घोषणा गरे । यो जीतपछि पुटिनको रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुसँग भेटघाट भयो । यसको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो देखेपछि पुटिन बिरामी भएको अड्कलबाजी गरिँदै छ ।
Apr192022 by Usha Lama AdminNo Comments
एजेन्सी, लन्डन : म्यानचेस्टर युनाइटेडका फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो र उनकी पार्टनर जर्जिना रोड्रिग्वेजले आफ्नो नवजात शिशुको मृत्यु भएको घोषणा गर्दै यसलाई ‘कुनै पनि अभिभावकले महसुस गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो पीडा’ भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा एउटा विज्ञप्तिमा उनीहरूले भनेका छन, ‘गहिरो दुःखका साथमा हामी घोषणा गर्छौं कि हाम्रो नवजात शिशुकाे मृत्यु भएको छ । ’उनीहरूले अगाडि भनेका छन्, ‘यो क्षतिमा हामी स्तब्ध छौँ । ’ ३७ वर्षीय रोनाल्डो र २८ वर्षीया रोड्रिग्वेजले जुम्ल्याहा सन्तान जन्माउने तयारीमा थिए । जुम्ल्याहामध्ये बालिका भने बाँचेकी छिन् । बालिकाको जन्मले आफूहरुलाई यो क्षण केही आशा र खुशीका साथ बाँच्न बल दिएको उनीहरूले बताएका छन् । ‘हाम्रो शिशु बालक, तिमी हाम्रो देवदूत हौ । तिमीलाई सधैं माया गर्नेछौं’, उनीहरूले लेखेका छन् । रोड्रिग्वेजले गर्भवती भएको खुलासा अक्टोबरमा गरेकी थिइन् ।
Mar162022 by Usha Lama AdminNo Comments
दुनियाँकै लोभलाग्दो छ युक्रेन राष्ट्रपतिको परिवार-जीवन: विश्वभरको प्रार्थाना यो न’उजाडियोस्
काठमाडौ । रुसी सेनाले युक्रेनमा आ,’क्रमण गर्दा धेरैको ज्यान गएको छ ।युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की असहाय देखिन्छन् र रुसी सेनासँग ल’डिरहेका छन्। विश्वले नै भनिरहेको छ सबैभन्दा पहिलो ख’तरामा राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की को ज्यान छ । दोस्रोमा उनको परिवार जो’खिममा छ ।त्यसपछि युक्रेनका जो कोही नागरिक जो’खिममा छन् । रुसले राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई मार्न सक्ने वा लामो समयको क’ठोर जे’लमा हाल्नसक्ने आँकलन श’क्ति राष्ट्रहरुको समेत छ ।यसैले अमेरिकाले आफ्नो देशमा श’रण लिनका लागि भनेको छ । हामी जहाज पठाउँछौ । हाम्रो देश आएर आफ्नो देशको रक्षा गर्नुहोस् अमेरिकाले आधिकारीक रुपमा राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की भनेको छ ।तर उहाँले मलाई अहिले सवारी हैन मेरो देश बचाउँन ह,’तियार चाहिएको छ । म मरे मेरो देशको माटोमा मर्छु तर देश बचाउँन अन्तिमसम्म ल’ड्छु भनेर फर्काएको जवाफले अहिले वि
Feb252022 by Usha Lama AdminNo Comments
काठमाडौं : युक्रेनले रूसी आ’ क्र’ म ‘णको सा’म’ना गरिरहेको छ। मिडिया रिपोर्ट अनुसार युक्रेनमा १३७ जना भन्दा बढीले ज्या’ ‘न गु’मा ‘इ स’के’का छन्। रूसी सेनाहरू पूर्वी, दक्षिणी र उत्तरी सी’मानाका बि’न्दुहरूमा युक्रेन छि’रे’का छन्। रूस र युक्रेनबीच विगत आठ वर्षदेखि ति’क्त’ता देखिँदै आएको छ। सन् २०१४ मा रूसले छिमेकी देशमा राजनीतिक उ’थल’पु’थलको फाइ’दा उठाउँदै युक्रेनको दक्षिणी क्रिमिया प्रायद्वी’पमा सैन्य नि’यन्त्र’ण का’यम गर्न थालेको थियो। युक्रेनको सेना र रूसी समर्थित वि’द्रो’ही’बीच पूर्वी युक्रेन दाे’नबासमा भने कहिल्यै यु”द्ध स’माप्त भ’एन। यु’द्धमा अ’हिलेसम्म करिव १४ हजार मानिसहरूकाे मृत्यु भएकाे छ । को हुन् भोलोदिमिर जेलेन्स्की ? भोलाेदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु अघि टिभीमा राष्ट्रपतिको भूमिका निभाएका थिए। सायद त्यतिबेला उनलाई थाहा थिएन कि एक दिन उनी
Feb242022 by Usha Lama AdminNo Comments
न श्रीमती न बच्चा सलमान खानको २३ सय करोड सम्पत्ति
दिल्ली। सलमान खानले अहिलेसम्म विवाह गरेका छैनन्। विवाह नगरेकाले ५६ वर्षका उनको छोराछोरी पनि छैन। उनको कुल सम्पत्ति २३ सय करोड भारतीय रुपैयाँ हो। यस्तो अवस्थामा उनको सम्पत्तिको वारिस को होला? सलमानले यदी आफूले विवाह गरेको खण्डमा र नगरी आफ्नो मृत्यु भएको खण्डमा आफ्नो सम्पत्ति कसको हुनेछ भनेर पनि खुलासा गरिसकेका छन्। ३४ वर्षयता सलमान बलिउडका स्टार छन्। उनी हरेक चलचित्रमा काम गरेबापत् १०० करोडभन्दा बढी ज्याला लिन्छन्। टाइम्स अफ इन्डियासँगको अन्तर्वार्तामा सलमानले भनेका छन् कि यदी उनले विवाह गरेभने उनको सम्पत्तिको आधी हिस्सा उनको ट्रस्टमा जानेछ। उनको ट्रस्ट संस्था बिइङ ह्युमनले गरिब तथा पीडितलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यदी विवाह गरेनन् भने र उनको मृत्यु भयो भने उनको सबै सम्पत्ति सोही ट्रस्टमा जानेछ।
Feb232022 by Usha Lama AdminNo Comments
काठमाडौं । ब्राजिलको रियो डि जेनेरियो राज्यको पर्यटकीय सहर पेट्रोपोलिसमा गत साताबाट परेको भारी वर्षाका कारण जारी बाढी र पहिरोका परी मृत्यु हुनेको संख्या १७६ पुगेको स्थानीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । रियो डि जेनेरियो राज्यबाट ६८ किलो मिटर उत्तरमा अवस्थित पेट्रोपोलिस नगरपालिकामा जारी यस बाढीमा परेर अरु कम्तीमा १०० जना अझै पनि हराइरहेका उनीहरुले जानकारी दिएका छन् । माटोमा पुरिएका मानिसहरूको खोजीमा उद्धार टोलीहरू दिनरात खटिरहेका छन्, अहिलेसम्म २४ जनाको उद्धार गरिएको छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा तीव्र वर्षा फेब्रुअरी १५ मा रेकर्ड गरिएको थियो । त्यसपछि धेरै पटक भारी वर्षा भएको छ । सोमबार दिनको समयमा वर्षाको लागि पूर्वानुमानको साथ, राष्ट्रिय मौसम विज्ञान संस्थानले रिपोर्ट गरेको थियो । हालको रेकर्ड गरिएको मृत्युको संख्या यस सहरको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै हो । सन् १९८८ मा विनाशकारी भारी वर्षाको
Feb212022 by Usha Lama AdminNo Comments
नयाँ दिल्ली : डेटमा गएको एकजोडीले १८ हजारको बिल तिर्नुपर्ने भएपछि फरार भएको घटना बाहिरिएको छ। बेलायतको नर्थ योर्कशायरमा भ्यालेन्टाइन डेमा सो जोडी पबमा रोमान्टिक डेटमा गएको थियो। दुवैजनाले खाना खाएको र म’दि’रा पि’ए’को स’मेत गरी करिब १८ हजार रुपैयाँको बील आयो । आफैले खाएको खानाको बिल ति’र्नुको सट्टा उनीहरु पैसा नदिएर भागे । त्यसपछि रेस्टुरेन्ट मालिकले फेसबुकको मद्दत लिएर जोडिको बिल सार्वजनिक गरिदियो। उनीहरुले रोमान्टिक डेटको लागि टेबल बुक गरेका थिए। तर बिल भने तिरेनन्। पछि पबले बील तोकिएको समयमा बुझाउन पनि निर्देशन दियो । यो जानकारी प्रहरीलाई पनि दिइएको छ। योसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पब मालिकसँग यस जोडीको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरेका समेत छन् । ‘द मिल’ नामक पबले यो जोडीको बिल सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरुले थाइ ग्रीन करी, ४ वटा वाइन र अन्य सामान लिएका थिए । तर, उक्
Feb192022 by Usha Lama AdminNo Comments
सुटुक्क आफ्नो प्रेमीले अर्कै संग बिहे गर्दै छन भन्ने प्रेमिकाले थाहा पाएपछी
प्रेमिकालाई छोडेर ती युवकले अर्को केटीसंग बिहे गर्दै थिए । तर यसको जानकारी उनको प्रेमिकाको कान सम्म पुग्यो । त्यसपछि के बाँकी रह्यो । उनले निर्णय गरिन्कि यदि त्यहाँ अग्नीको सात फेरा लिएर सिन्दुर हाल्नु अघि नै उनी यो बिहे रोक्नेछिन् । यो बिहे कदापी सम्भव हुनेछैन। तब फिल्मी शैलीमा, प्रेमिका आफ्नो प्रेमीको बिहे गर्ने ठाउँमा पुगिन् । उनको हातमा एक पे स्तो ल थियो । त्यो प्रेमीको कञ्चटमा राखिन् र त्यहाँबाट प्रेमीलाई लिएर गइन् मानिसहरु घटना देखेर डराए र कसैले रोक्ने समेत कोशिस गरेन । कसैले कुनै चाल चलेमा दुलाहा जिउँदो नरहने उनले ध म्की दिएकी थिइन् । मानिसहरुले घटनाबारे केहि बुझ्नु भन्दा पहिले, प्रेमिका यति चाँडै आफ्नो प्रेमी सम्म पुगिन् र घटना गरिन् कि कसैलाई यसको भनक समेत भएन । दुलाहालाई त्यसरी मण्डपबाट उठाएर एक युवतीले लगेपछि त्यहाँ उपस्थित मानिसहरुमा डर फैलियो । दुलहा हराइरहेको देख